Mpiady 8 miaraka amin'ny vintana ratsy indrindra - Wwe
Mpiady 8 miaraka amin'ny vintana ratsy indrindra
Ny vintana dia iray amin'ireo zava-dehibe tokony hananana raha te hahomby amin'ny tolona ny olona iray. Azonao atao ny manana ny talenta rehetra eto amin'izao tontolo izao, fa tsy misy vintana kely akory dia mety ho sahirana ianao.
Jereo fotsiny ny Roman Reigns. Nahavita be tamin'ny WWE izy, ary rehefa nanomboka nanomboka nandeha ny zava-drehetra, dia niverina ny leokemia ary tsy maintsy niady ho an'ny ainy izy.
Tsy ny mpanjaka irery no tao anaty WWE niaina vintana. Betsaka ny olona voarohirohy amin'ny sehatry ny tolona no niaina vintana ratsy ka nisy vokany ratsy teo amin'ny asany sy ny fiainany mihitsy aza.
Eto isika dia hijery tranga valo izay naharetan'ireo olo-mitolona amin'ny tolona ratsy indrindra azo inoana.
Naratra 24 ora i Batista 24 ora taorian'ny nahazoany ny amboara eran-tany
Indraindray, ny fahalehibiazana sy ny hozatra dia mety hiteraka olana lehibe amin'ny olona iray, araka ny fahitana an'i Batista
Tamin'ny taona 2009, ny sary lohateny WWE momba ny RAW dia nifantoka tamin'ny olona roa: John Cena sy Randy Orton. WWE dia niezaka mafy namidy tamin'ny rehetra fa ireo roa ireo no RAW tsara indrindra natolotra. Na izany aza, ny sasany amin'ny fifanolanana sy ny lalaon'izy ireo dia tsy dia tsara loatra, noho izany WWE dia nanapa-kevitra tampoka fa hanampy olon-kafa ao amin'ilay mix: Batista.
ahoana no mahatonga ahy tsy ho mora tohina
Nandresy an'i Randy Orton tamin'ny lalao cage vy tao amin'ny Extreme Rules 2009 ny 'The Animal' mba handresy ny Tompondakan'ny WWE, nanamarika ny fanapahany voalohany tamin'io amboara eran-tany io. Mampalahelo fa lany ny vintana Batista iray andro taty aoriana rehefa nandriatra ny bisikiletany tamin'ny lalao izy. Ny ratra dia nanery azy hiala ny titre WWE ary hivoaka ny sary an-tsoratra hatramin'ny taona manaraka.
Ny nahadiso fanantenana ity ratra ity dia ny tsaho fa manomboka ny fifandonana eo amin'i Batista sy John Cena. Ny roa lahy dia kintana ambony WWE ary fifandrafiana teo amin'izy ireo no nahafinaritra. Na izany aza, WWE dia tsy maintsy niverina tany amin'ny drafitra tany Cena mifanohitra amin'i Orton tany am-boalohany, izay toa tsy dia nahaliana.
Na dia nanao fifandirana aza i Cena sy Batista tamin'ny farany, dia tsy nampamontsina izany ary tsy nanana fientanam-po be loatra raha toa ka nanomboka ny fifandrafian'izy ireo teo aloha, ary manam-potoana bebe kokoa hampivelarana ny zavamananaina. Indraindray, ny zavatra ilain'ny tsirairay dia vintana kely fotsiny. Raha tsy misy izany dia mitranga ny zavatra toy izao.
Batista dia tsy nahatratra ny mety ho antenaina nantenainy taminy ary io ratra io dia mpandray anjara lehibe amin'izany. Niala tamin'ny orinasa izy tamin'ny farany ary nanodina indostria.
ahoana no hahalalana hoe rehefa tsy tia anao intsony ny vadinao
ny fihazonana ny fitiavana dia endrika fanararaotana
ny vadiko namela ahy ho an'ny vehivavy hafa haharitra ve
tsy te-hiraharaha intsony aho
lisitry ny wwe ppvs 2016